‘लगानी जुटाउन अर्थमन्त्रालयमा खतिवडा’ - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘लगानी जुटाउन अर्थमन्त्रालयमा खतिवडा’
दीपक भट्ट काठमाडौं फागुन १४
अर्थमन्त्रीका आकांक्षी एमालेका नेताहरूलाई अश्चर्यमा पार्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार अर्थविज्ञ डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। योजना
आयोगका दुई पटक उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गर्भनरका रुपमा सफलत अर्थ रणनीतिकारको छवि बनाएका खतिवडा नेपालमा मौद्रिक क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन्।
आफ्नै गृहजिल्ला झापाका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग खतिवडाले लामो समयदेखि आर्थिक मामिला सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दै आएका थिए।
खासगरी अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएयता बजेट बनाउनेदेखि एमालेको आर्थिक रणनीतिको खाका कोर्ने र निर्वाचन घोषणा पत्र बनाउने मुख्य पात्र नै खतिवडा थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो चलाखीपूर्वक खतिवडालाई अर्थमन्त्री छानेका छन्, जतिबेला उनको आर्थिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्न लगानी जुटाउनु पर्ने अवस्था छ। र त्यसका लागि खतिवडा सबैभन्दा सही विकल्प थिए।
व्यापक रुपमा आर्थिक विकासका परियोजना अगाडि बढाउन अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री चाहिन्थ्यो, ओलीले त्यसअर्थमा सही छनोट गरेको बताउँछन् अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल।
‘नेपालले विकासको नारा लगाएको धेरै भयो, तर उपलब्धी जनता माझ पुग्न सकको छैन’, खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य एजेण्डा नै आर्थिक विकास हो, त्यसका लागि अर्थतन्त्र बुझेका युवराज खतिवडालाई ल्याएको हो।’
हुनत युवराज खतिवडा एमालेको राजनीतिसँग जोडिएको लामो समय भयो, तर उनी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो अर्थतन्त्र बुझेका व्यवसायिक व्यक्ति हुन्।
सन् १९९१ मा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट विद्यावारिधि गरेका खतिवडा ०५९–६२ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए। त्यसअघि उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अतिथी संकाय सदस्यका रुपमा समेत भुमिका निर्वाह गरेका छन्।
युएनडिपी रिजनल सेन्टरमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रुपमा काम गरिसकेका खतिवडाले वाम गठबन्धनको घोषणापत्र बनाउने जिम्मेवारी पाउनेमध्ये एक थिए।
यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेर बजेट निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेका खतिवडालाई अबको पहिलो चुनौति संघीय बजेट बनाउने रहेको छ। अबको बजेट कम्तिमा १५ खर्बको बनाउने गरी अर्थमन्त्रलयमा छलफल सुरु भैसकको छ। तर बजेटको स्रोत आफैंमा चुनौती रहेको बेला विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय बित्तिय संस्थाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेका खतिवडालाई ल्याइएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो एक वर्षदेखि रेमिट्यान्स खस्कँदो क्रममा रहेको छ। त्यस्तै राजश्वका शीर्षकहरु पनि कमजोर देखिएका छन्। उद्योग व्यवसाय पनि सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा खतिवडा अर्थमन्त्रालय छिरेका छन्।
साधारण खर्च नै धान्न अप्ठेरो भइरहेका बेला देशको बाह्य क्षेत्र पनि यतिखेर ऋणात्मक छ। पुस मसान्तसम्म देश ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ शोधनान्तर घाटामा छ। उच्च आयातका कारण मूल्यवृृद्धि पनि पछिल्लो तीन महिनादेखि वृद्धि हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको सुचाङ्कहरुले नै देखाएका छन्।
व्यापार घाटाका केही सुधार देखिए पनि नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा यही रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३ खर्व ५२ अर्ब व्यापार घाटा रहेको देखिन्छ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा राज्यको नियमन हुनुपर्ने मान्यता राख्ने खतिवडालाई नीजि क्षेत्रले खरो अर्थ रणनीतिकार मान्छ। तर खतिवडाले नीजि क्षेत्र उकास्ने नीति लिनुपर्ने अर्थविज्ञ खनालको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर गराउने सरकारको लक्ष थियो। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समिक्षले त्यसका लागि चुनौती रहेको देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि ‘घरजग्गामा अधिक ऋण प्रवाह भयो, यो अनुत्पादक क्षेत्र हो, लागनी कम गर्नुपर्छ’ भन्ने खतिवडाको नीति थियो। त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि छ र बैंकहरुले घर जग्गाका लागि दिइने कर्जालाई खराब कर्जाको सुचीमै राख्न थालेका छन्।
खतिवडाले सेयर बजारीहरु माथि पनि बडा नियमन चाहेका थिए। तर उनी गभर्नर हुँदा त्यो सम्भव भएको थिएन। सेयर बजारको मुनाफा दर कम गराउनु पर्ने खतिवडाको मत थियो।
बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई नियन्त्रण गर्दै कृषि तथा पशु सम्बन्धी सहकारीहरुलाई बढावा दिनु पर्ने मान्यता खतिवडाको छ। उनी कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्यमबाटै देशको आर्थिक वृद्धि ३ देखि ४ प्रतिशतले बढाउन सकिने मान्यता राख्छन्।
प्रकाशित १४ फागुन २०७४, सोमबार | 2018-02-26 20:02:02